Video / VCD editing
Video / VCD editing
Thread: Video / VCD editing
01-13-2010 08:39 PM #21
ပြန်စာ -> Video / VCD editing
ဟိုင်း အစ်ကိုရေ ကျွန်တော် ပြောတာ ကဘာကိုဆိုလိုနေမှန်းမသိဘူး ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ စိတ်မရှိပါနဲ့နော် အစ်ကို ကျွန်တော် premier video editing ထဲမှာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ပြောပြတာက သူက ကိုယ် ရိုက်ထားတဲ့ Video Camera ထဲက
ရုပ်တွေကို ကွန်ပျူတာ နဲ့ Capture ဖမ်းပြီး Premier ကနေ ဖွင့်လိုက်ရင် သူ့ကိုယ်သူ အပိုင်းအပိုင်းလေးတွေ ခွဲထုတ်ပေးတယ် တဲ့ အစ်ကိုရေ သူပြောတာတော့ ဟို Ulead Pinical Studio9တို့လို လေ အစ်ကို ကိုယ်ထည့်လိုက်တဲ့ Video ဖိုင်တွေ
ကို auto အပိုင်းအပိုင်း လေး တွေဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတာ ကိုပြောတာ အစ်ကို အိုကေလား အစ်ကို ကျွန်တော့်ကို နည်းလေး ပြောပြပေးပါဦးနော် ကျွန်တော် အရမ်းသိချင်လိုပပါ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကိုမေးတော့ သူက မပြောပြဘူးဗျာ :e :e
The Following2Users Say Thank You to crystalhein For This Useful Post:
03-16-2010 05:31 PM #22
ဒီနေရာမှာ ကို chit tee တောင်းဆိုလို့..
Ulead Video Studio နဲ့ လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို
ဖိုရမ်မှ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးလည်း လေ့လာနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ဒေါင်းလုပ် ဆော့ဝဲဒ် (174 MB)
စာအုပ်ကို attached file မှာ ယူပါခင်ဗျာ..
The Following3Users Say Thank You to ဖန်ဆင်းရှင် For This Useful Post:
chit tee, rolley, ကိုထွန်း
06-07-2010 12:34 AM #23
ပြန်စာ -> ပြန်စာ -> Video / VCD editing
[quote author=crystalhein link=topic=1371.msg42913#msg42913 date=1263391742]
premier ကနေ capture ဖမ်းရင် scene detect ဆိုတဲ့နေရာမှာ အမှန်ခြစ်လေးဖြည့်ပေးလိုက်ပါ..ဒါဆိုရင်အိုကေသွားလိမ့်မယ်..မရရင်ပြန်ပြောပါ...အားလုံးကိုလေးစားလျှက်...
htinlin, rolley, ကိုထွန်း
06-07-2010 12:52 AM #24
[quote author=ဖန်ဆင်းရှင် link=topic=1371.msg23276#msg23276 date=1240315397]
VCD သီချင်းတွေမှာ သီချင်းအသံလာတာနဲ့ စာတမ်းလေးတွေ အရောင်ပြောင်းသွားတာကို
သီးသန့်လုပ်တဲ့ software ရှိတယ်တဲ့.အဲဒီ software ကတော့
AV video karaoke maker ပါ..ဒါပေမယ့် သင်ပေးမယ့်သူမရှိတော့ လုပ်ရတာအဆင်မပြေလို့..
ဒီ software ကိုလည်း ကျွန်တော် ဒီဖိုရမ်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်..
အစ်ကိုရေ.. AV video karaoke maker ကိုဘယ်မှာတင်ထားလဲမသိဘူး..ရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေလို့..Link လေးနဲ့ပြန်တင်ပေးပါလားခင်ဗျား..
11-20-2011 07:49 PM #25
Video Edit လုပ်ရန် အတွက် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ ဆိုတာ သိရင်ပြောပြပေးကြပါခင်ဗျား။
ဥပမာ Memory ကဘယ်လောက်၊ Hard Disk က ဘယ်လောက်၊ VGA ကဘယ်လောက် ရှိသင့်တယ်၊ ရှိရင်တော့ဖြင့် ဘာတွေဘယ်လို အဆင်ပြေတယ် စသဖြင့်ပေါ့။
The Following2Users Say Thank You to Kyaw Jone For This Useful Post:
11-20-2011 07:55 PM #26
Originally Posted by ဖန်ဆင်းရှင်
[quote author=နေ link=topic=1371.msg7653#msg7653 date=1223112986]
ဒီ link လေးတွေလိုက်ကြည့်ပေးပါဗျာ ... တင်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်တင်ပေးသွားမှာပါ ...
ကိုဖန်ဆင်းရှင် ကျွမ်းကျင်သွားရင် ဒီမှာပြန်လာရေးပေးဗျာ ... ဘယ်သူမှလိုက်မလုပ်ရင်တောင် ကျွန်တော်၁ယောက် အနည်းဆုံးလိုက်သင်မယ် ...
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်အခု ulead software ကို သုံးကြည့်နေတယ်ဗျ
အစ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ကိုးကားတဲ့စာအုပ်ကလေး ပေးမယ်လေ...[/QUOTE]
The Following3Users Say Thank You to Kyaw Jone For This Useful Post:
rolley, ကိုထွန်း, ဖန်ဆင်းရှင်
11-20-2011 07:56 PM #27
သင်ပေးရင် ကျွန်နော်လည်း သင်ယူပါ့မယ် ခင်ဗျား
11-21-2011 07:02 AM #28
နောက်ပြီး capture ဖမ်းတာလေးကိုလည်း step by step ပြောပြပေးနိုင်မလား ခင်ဗျား? ကျွန်တော် capture ဖမ်းတာ အဆင်မပြေဖြစ်နေလို့ပါ။
Last edited by Kyaw Jone; 11-21-2011 at 12:27 PM.
11-28-2011 04:20 PM #29
ဟင်း ဘယ်သူမှလည်း အဖြေမပေးတော့ပါလား။ နာ့နှယ်တော့ ဒုက္ခပါပဲနော။
11-28-2011 09:16 PM #30
ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့အကြံ (အကျန် ဟု မဖတ်ပါရန်)
Originally Posted by Kyaw Jone
ကျွန်တော် နည်းနည်း အကြံပြုချင်ပါတယ်၊
အရင်ဆုံး အကြံပြုတာကို ဖတ်ပါ၊ ပြီးမှ ကျွန်တော်လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ (ဝါသနာအရ) စက်နဲ့ ပရိုဂရမ်အကြောင်း ပြောပြမယ်၊
အရင်ဆုံး cpu = dual core or better (Intel Core i series 5,7)ဆိုရင် ပိုအဆင်ပြေပါမယ်။ Ram Dual Channel 4Gb (if Os is 32 bit)(2Gbx2) if Os is 64 bit as much as you can, Hdd = 500 Gb or more,VGA= 1 or2Gb
ဒါက အကြံပေးတာပါ ကျွန်တော် လက်ရှိ သုံးနေတာက
AMD athlon X2 (Dual core 2.4ghz) Ram DDRII 800/2Gbx2, Hdd=500Gbx2, VGA 512(asus ati 3845/silent) Hp Branded ကို upgrade လုပ်ထားတာပါ၊ သုံးတာက pinnacle studio 15 ultimate, win7 64bit ဒါက desktop ပါ၊
Laptop ကတော့ Intel Core i5 (2.53Ghz with turbo boost) Ram DDRIII 1333/2Gbx2, Hdd only (320) No VGA သုံးတာကတော့ အပေါ်ကနဲ့ အတူတူပါပဲ၊ ကျန်တာတွေ သိပ်မသိသာပေမယ့်၊ Encoding မှာ Laptop က တစ်နာရီစာ ကို 40 မိနစ် ကျော်ကျော်နဲ့ ပြီးပါတယ်၊ task manager ပေါ်ကနေ ကြည့်ရင် cpu4Core (2 Core ကတော့ Hyper thread မို့လို့4Core လို့ပြတာနေမှာပါ) မှာ 80 % လောက်သာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
desktop မှာတော့ တစ်နာရီစာ ကို 50မိနစ် ကျော်လောက် ကြာပါတယ်၊ transistion, effect, audio dubbing, title စတာတွေများရင်ပြောတာပါ၊ task manager ပေါ်ကနေ ကြည့်ရင် cpu 100% အမြဲ ပြည့်နေတာပဲ။
အဲတတ်နိုင်ရင်တော့ Mac Pro သာဝယ်သုံးဗျို့:P
The Following6Users Say Thank You to skhaung For This Useful Post:
AndrewSway, chit tee, konge, rolley, ကိုထွန်း, ဖန်ဆင်းရှင်
Quick Navigation ရုပ်ရှင်နှင့်အသံဖမ်းအင်ဂျင်နီယာပညာ Top
Video Editing ဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု ဆော့(ဖ)၀ဲများ
By konge in forum ရုပ်ရှင်နှင့်အသံဖမ်းအင်ဂျင်နီယာပညာ
Last Post: 10-11-2012, 03:17 PM
Vegas Pro 9.0 Video Editing မြန်မာလိုရှင်းပြထားတဲ့စာအုပ်လေး
By kophyoe2008 in forum စာအုပ်စာတမ်းများ
Last Post: 11-29-2011, 12:42 PM
Ulead Video Studio6(Video Editing သင်ခန်းစာ) (မြန်မာလို)
By phoeko in forum အထွေထွေ E-book & Tutorials စာအုပ်များ
Last Post: 08-30-2010, 08:58 PM
How abt video editing??
By Yoe Yar in forum အကြံပေးရန်
Last Post: 05-05-2008, 11:03 AM